Iziqinisekiso - AnHui Jin Bai He Medical Izixhobo Co., Ltd.
"Sizimisele ukuphila ubomi obunempilo."
—— CEO, uShaowei Wang
▍ Ukulwa ne-coronavirus, senze uhlengahlengiso olukhawulezileyo kwimigca yemveliso. Iziko lemveliso yemaski lafunyanwa kwisithuba esingaphantsi kweeveki ezi-3 zixhamla kumava ethu okwenza izixhobo zonyango.
▍ Ngoku sinakho ukubonelela ngezigidi ezi-3 zeepcs / ngosuku kwaye siqeqeshwe yi-FDA (iMask Mask) kunye ne-CE (iMaski yezoNyango). Sisoloko sikulungele ukubonelela ngezatifikethi kubaxhasi, kwaye sijonge phambili ekusebenzisaneni nazo zonke iinkampani ezifuna iimaski kunye nezinye izixhobo zonyango.
Iinkcukacha zePakethe yePhiko
Uluhlu lweNombolo: D374833 (Ikhowudi: LYU)
Igama: IiMaski zoNyango ezilahliweyo
Inombolo yesalathiso: 20200627
Izitulo ezinamavili & Scooter:
▍ Iinkcukacha zePakethe yePhiko
▍ Zonke iziqwenga zemaski ziya kuqiniseka ukuba ziyakuphepha ukwaphuka ngexesha lokuhamba. Iinkcukacha zephakeji zibonisiwe apha ngezantsi (kokubini ngaphakathi nangaphandle kokupakisha). Unokunxibelelana nathi kwakhona ukufumana ulwazi ngakumbi.
Yiba ngabasekeli bethu, ukwenza ulungiso olungcono.
—— URehacare, ka-2019
I-JBH yezoNyango, Simahla uBomi bakho
iimaski zobuso zonyango, iimaski ezilahlwayo, ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana, ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi, ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo, ophakamisa isigulana ngombane,
ukhuko lwezonyango oluhlengahlengiswayo, iimaski zobuso zonyango, iimaski ezilahlwayo, ophakamisa isigulana ngombane, ophakamisa isigulana ngesanti kubunzulu baphantsi, ibhedi ehlengahlengiswayo kwizigulana,